Dib u eegista iyo qoraalka Iacobus ee Matilde Asensi - Ikkaro
Inicio >> Buugaag >> Iacobus oo uu qoray Matilde Asensi
Iacobus oo uu qoray Matilde Asensi
Ma ogaan doono waqtigan Mateldi asensi iyo riwaayadihiisa. Iacobus waa kan saddexaad ama afraad ee aan akhriyo, si fiican uma xasuusto, oo had iyo jeer waa sheeko si heer sare ah loo soo agaasimay. Agile, dhakhso leh oo xiiso leh.
Iacobus wuxuu ku habboon yahay markaad rabto iftiin, taariikh iyo akhris akhris. Waad jeclaan doontaa haddii aad jeceshahay waxyaabaha la xiriira Templars iyo Amarka Templar.
Ficilku wuxuu dhacayaa qarnigii XIII - XIV, kala diriddii Amarkii Macbudka ka dib. Raahibi ka mid ah amarka militariga ee Isbitaalka de San Juan, oo loo yaqaan xirfaddiisa dambi-baaris ama dambi-baaris, ayaa loo diraa Pope John XXII si loo baaro geerida Pope Clement V iyo King Philip IV ka dib inkaartii ay bilaabeen Grand Master of Order of macbudka in lagu qisaaso.
Waxay ku saabsan tahay Galcerán de Born, Il Persiquitore tanina waxay kicin doontaa safar iyada oo loo marayo dhacdooyin kala duwan sida Paris, Avignon iyo Camino de Santiago ilaa Finisterre. Isku darka, milatariga, temlar, isbitaalka iyo amarrada Yuhuudda ee ku saabsan taariikhda shaqsiyadeed ee jilayaasha waaweyn.
Waa biimayn xawaare ku socota oo goob taariikheed oo weyn lagu weheliyo waxqabad iyo tacabur.
Waxaan si aad ah ugu riyaaqay sharraxaadda iyo dejinta xaafadda Yuhuudda, tan iyo markii magaaladayda, waxaan haysannaa waxa u ahaa rubuc muhiim ah oo Yuhuuddu leedahay illaa laga eryo Boqortooyadii Katooliga ahayd taasna waxay u tahay aag qurux badan maanta. Ku soo dhex socoshada xaafadaha Yuhuudda maanta ayaa qiyaasaya sheekooyin hore.
Mawduucyada Xiisaha Leh ee Xusuusta iyo Cilmi-baarista
Montium burburka Las Médulas
Daqiiqad marka la sharaxayo Las Medulas, ugu weynaa Boqortooyadii Roomaanku waxay furtay god macdanta laga qodo. Waxay ku taal El Bierzo ee León.
Waxay kaloo sharraxaysaa Montium Ruin ama Short Mining waa nidaam macdan ah oo ay Roomaanku u isticmaali jireen inay ku helaan dahab. Waxay ka kooban tahay duminta buurta.
Xusuusinta Pliny ayaa xusuustayda kicisay. Isaga oo weyn Taariikhda Dabiiciga ah, Xikmad-yahankii Roomaanku wuxuu ka hadlay dhiig-miirashada baaxadda weyn ee ay fulisay Imbaraadoorkii Ogosto ee Hispania Citerior berigii waagii hore. Hal meel oo gaar ah oo ku yaal Roman Hispania wuxuu u qalmay dhammaan dareenka aqoonyahannada: Las Médulas, halkaas oo ay Roomaanku ka heleen labaatan kun oo rodol oo dahab saafi ah sanadkiiba. Nidaamkii loo isticmaalay in laga soo saaro birta dhulka ayaa ahayd waxa loogu yeero montium burbur, kaas oo ka koobnaa in si lama filaan ah looga sii daayo biyo fara badan kaydadka adag ee ku yaal meelaha ugu sareeya buuraha Aquilanos. Biyaha la sii daayay ayaa si caro leh uga soo degay toddobada biyo mareen oo markii ay gaareen Las Médulas, ku xayiran shabakad ka mid ah qolalkii hore ee ay addoommadu qodeen, waxayna sababtay dhul-gariiryo waaweyn oo dhulka ku muday. Hadhaagii dahabka waxaa loo jiiday agogas, ama harooyin waawayn oo u dhaqmay sidii dhar maydh, halkaas oo biraha dahabiga ah laga soo ururiyo laguna nadiifiyo. Hawlahan oo dhan waxay soconayeen hakad la'aan laba boqol oo sano.
Ku saabsan amarrada militariga
Waxa igu kalifay inaan ka fikiro iyo mawduucyada qaarkood ee aan doonayo macluumaad dheeri ah waxay ku saabsan yihiin amarrada kala duwan ee aad sheegto
Amarka Isbitaalka Saint John ee Qudus
Sida ay u dhacdo markay wax akhrido Da Vinci CodeDhammaan astaamaha u oggolaanaya helitaanka macluumaadka deegaanka waxay u muuqdaan kuwo aad ii xiiso badan. Madaafiic, lugaha goose, dhismayaasha octagonal, iwm.
Templars iyo Valencia, Sagunto, Camp de Morvedre
Waxaan jecelahay inaan keeno aqoonta kala duwan ee aan barto deegaanka iyo hareerahayga.
Sidan iyo kadib markaan arkay tusaale ahaan qaabka ay u lahaayeen inay ku aqoonsadaan dhismayaasha Templar qaabkooda octagonal, waxaan la yaabanahay.
Ma jiraan dhismayaal Templar ah oo aan degganahay?
Ma jiraan daraasado ku saabsan
Dukaanka buugaagta ee Penelope Fizgerald
Amaanta gaabiska Carl Honoré
Cudur calaami ah. COVID-19 ayaa ruxeysa adduunka
Ithaca ee Cavafis
Roob Jaale ah
Categories Buugaag Tigidhka tigidhka
Sida loola socdo ip-ka wadanka aan rabno TOR
2.1 Montium burburka Las Médulas
2.2 Ku saabsan amarrada militariga
2.4 Templars iyo Valencia, Sagunto, Camp de Morvedre